Psychology of man - boky
Ny boky momba ny psikolojian'ny olombelona dia hanampy ny tsirairay izay te hahita valiny amin'ireo fanontaniana izay mampijaly ny fanahy, dia afaka manosika anao handinika ny antony manosika, sy ny zavatra ataony manokana ary ireo manodidina azy ireo. Ankoatra izany, hampianatra anao izy ireo hahita ny antony mahatonga ny fiandohan'ny toe-javatra misy fifandonana, ka hanatsara ny kalitaon'ny fiainanao.
Boky momba ny sikolojia amin'ny fitondrantenan'olombelona
"Fahasalaman'ny psikolojika. Fanofanana momba ny fifanoherana ", M. Litvak . Tianao ve ny hianatra ny fomba hananganana fifandraisana misy eo amin'ny samy lahy na samy vavy, eo amin'ny sehatry ny fianakaviana sy any am-piasana? Ity boky ity dia hampianatra ny fomba tsy hamerenana ny fehezan-teny henjana ataon'ny mpanao heloka bevava ary hivoatra amin'ny fifanoherana amin'ny fahasarotana rehetra izay ahitana fahavoazana ara-moraly farafahakeliny. Ankoatra izany, hianatra ny tsiambaratelon'ny tena fisakaizana, fitiavana am-pitiavana, asa mahafa-po.
"Aza mihodinkodina amin'ny alika! Boky momba ny fampiofanana ny olona, ​​ny biby ary ny tenako ", K. Payor . Io no iray amin'ireo boky tsara indrindra momba ny psikology olombelona. Ny mpanoratra dia namorona fomba vaovao iray manokana izay manampy anao hampianatra ny hafa hanao araka izay irinao. Tsia, tsy tokony hieritreritra ianao fa momba ny NLP, ny hypnosis, sns. Fanamafisana mendrika - ity no sekretera nozaraina tamin'ireo mpamaky Amerikana mpanoratra, ary ankoatra izany, biologista, Pior.
"Vakio ny lehilahy iray tahaka ny boky iray 90 minitra", B. Barron - Tiger, P. Tiger . Ilaina ny boky, indrindra ho an'ireo izay mifandray amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olona. Izany dia hanampy amin'ny fahatakarana ny fahatakarana ny fihetsiky ny olona manana endrika karazana. Tsara homarihina fa ny fampahalalana voatondro dia mifototra amin'ny lohahevitra ara-teôlôjian'ny mpanoratra momba ny fizarazaran'ny psikology olombelona amin'ny karazany manokana.
"Psychology of emotions. Fantatro ny fihetseham-ponao, "P. Ekman . Iza no nilaza fa tsy mahafantatra olona iray alohan'ny hiresahanao aminy? Ity boky ity dia mendrika ny ho eo amin'ny lisitry ny tsara indrindra amin'ny psikology olombelona. Mampianatra ny fankasitrahana ny fihetseham-pon'ilay sarotra: mifehy, mazava na miafina. Ny mpanoratra dia mizara amin'ny mpamaky ny teknika ahafantarana, manombatombana ary manitsy ny toetrany ara-pihetseham-po, na dia ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fivelarany aza.
Boky momba ny psikolojia mifandray amin'ny olona
"Herin 'ny fihetseham-po amin'ny fifandraisana", V. Boyko . Indraindray, ny olona iray, raha tsy mahita azy, dia manaitra ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny herim-pony. Tsy vitan'ny hoe manentana ny mpiara-mitory aminy fotsiny izy, fa koa mba hahatonga azy ho ketraka.
"Ny fahatsoran'ny fifandraisana," R. Brinkman . Ny boky malaza momba ny psikology amin'ny fifandraisana amin'ny olona iray amin'ny endrika mora dia maneho ireo tsiambaraton'ny fifandraisana. Manome toro-hevitra ny Amerikanina psikology mba hahatakatra ny fomba fitondran-tena amin'ny olona sarotra, ahoana no hampiato fifandonana amin'ny olon'ny fifanoherana iray sy ny fomba hamadihana izany tsy fifankahazoana amin'ny fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa izany.
"Grand Master de la Communication", S. Deryabo . Te-hanatsara ny fahaizanao mifampiresaka ve ianao amin'ny fampitomboana ny kolontsainao ara-tsaina sy ny fahaiza-manaonao amin'ny fifandraisana isan'andro? Ary izao indrindra no ilainao.
"Fifampiraharahana amin'ny 100%", I. Dobrotvorsky . Mpanazatra ara-barotra fanta-daza dia mizara fomba mahomby amin'ny fitantanana fifampiraharahana ara-barotra amin'ny fahasarotana maro samihafa. Ity boky ity, amin'ny voalohany, dia mahaliana amin'ny fiheverana ny toe-javatra iainana andavanandro, ny fanadihadiana momba ny psikology olombelona dia tarihina. Hianatra momba ireo fomba vaovao izay mihoatra noho ny fomba fifampiraharahana mahazatra.
"Ny fitenenan'ny resaka," Allan sy Barbara Pease . Ireo mpamorona an'ity sangan'asa ity dia ilay mpanoratra malaza antsoina hoe Allan Pease sy ny vadiny. Ao amin'ny bokiny, mizara ireo tsiambaratelon'ny mpamaky izy ireo izay manampy amin'ny fisafidianana ireo fehezin'ny mpiara-mitory ireo izay lazaina tsotra fotsiny amin'ny fahalalam-pomba sy ireo izay mendrika ny mamoaka fitsipika tsy misy dikany.
Ahoana no hisorohana ny ho saro-kenatra, miala ary tsy azo antoka?
Narcolepsy - inona ity aretina ity ary ahoana no fomba itondrany azy?
Fihetseham-po sy fahatsapana amin'ny psikology
Fanamafisana ny bakteria - ny endri-tsoratry ny teknolojia vaovao ho an'ny tokantrano
Ahoana ny fomba famolavolana ny zana-ketsa?
Chanterelles miaraka amin'ny crème - recipe
Salady misy alika kesika
Famafàna lasam-pandrefesana laser
Harikot tsaramaso amin'ny voatabiha
Nahoana ianao no manonofy hoe trano nodoranao?
Lingonberry nandritra ny fitondrana vohoka
Kyata - ilay resipe